Degso Game loogu talagalay Windows
Rockstar, abuuraha taxanaha GTA, wuxuu sii daayay Grand Theft Auto 5, ciyaartii ugu dambeysay ee taxanaha GTA, ama GTA 5 oo kooban, loogu talagalay PlayStation 3 iyo Xbox 360 bishii Sebtember 2013. GTA 5 Faahfaahinta Ciyaarta Rockstar wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay bishii Juun 2014 inuu sii deyn doono nooca PC-ga ee ciyaarta ka dib...
Vindictus waa ciyaar MMORPG ah halkaas oo aad kula dagaallanto ciyaartoy kale oo garoonka jooga. Waxaa lagu qurxiyay waxyaabo quraafaad ah, Vindictus wuxuu siiyaa fursad uu ku dagaallamo isagoo ciyaartooyda kaga tagaya garoon khariidado taageeraya ilaa 4 ciyaartoy. Vindictus wuxuu ku farxi doonaa kuwa raadinaya waayo -aragnimo...
Soodejiso Khiyaamada Khiyaamada Khiyaanada Mashiinka waa barnaamij khiyaamo ciyaar xirfad leh oo loo soo saaray il furan, oo APK-kiisa sidoo kale loo isticmaali karo Windows 10-ka PC-yada aadka loo doonayo. Waxaad si toos ah u faragalin kartaa goobaha adag ee ciyaaruhu kulajiraan Khiyaanada Mashiinka, taas oo kuu ogolaaneysa inaad...
Wolfteam, oo ku jirtay nolosheena ilaa 2009, waxay soo jiidataa dareenka astaamaheeda gaarka ah, oo aan ugu yeerno FPS; taasi waa, ciyaar aan ku toogno, kuna ciyaarno indhaha dabeecadda. Muuqaalka ugu fiican ee Wolfteam ayaa ah in dabeecadeena ay si lama filaan ah u yeelato qaab yeey isla markaana sidan oo kale ugaarsan karto kuwa ka soo...
DayZ waa ciyaar door-ku-ciyaar ah oo khadka tooska ah ku leh nooca MMO, kaas oo u oggolaanaya ciyaartoydu inay si dhab ah shaqsi ahaan u la kulmaan waxa dhici doona ka dib aakhirada zombie oo leh qaab-dhismeed lagu tilmaami karo jilitaanka badbaadada. DayZ, oo ah ciyaar furan oo ku saleysan adduunka, waxay ku saabsan tahay xaaladda...
Necken waa ciyaar ficil-ficil ah oo ciyaartoydu si qoto dheer ugu galaan hawdka Sweden. Necken, oo ay soo saartay istuudiyaha ciyaarta ee loo yaqaan Joccish, oo si madax-bannaan u horumariya cayaaraha isla markaana bilaash loogu siiyo ciyaartoyga, ayaa ka dhaca kaymaha Sweden. Ciyaarta, oo aan ku eryanayno nafley ruuxi ah oo la...
ELEX waa ciyaar RPG-ku-saleysan adduunka oo furan oo ay kooxdu soo saartay, taas oo markii hore la timid ciyaaro door-door ah oo guul leh sida taxanaha Gothic. ELEX, oo nagu soo dhaweyneysa adduunyo fantastik ah oo la yiraahdo Magalan, waxay la timaadaa isku -dhaf aad u xiiso badan. Ciyaaraha doorku waxay guud ahaan u qaybsan yihiin...
RimWorld waa gumeysi cilmiyaysan oo uu wado sheeko-yaqaan caqli ku saleysan AI. Waxaa dhiirrigeliyay qalcadda Dwarf, Firefly iyo Dune. Waxaad ku bilowdaa saddex ka badbaaday doontii ku burburtay adduun fog. Maamul dareenka gumeystaha, baahidiisa, boogaha, jirrooyinka, iyo balwadaha. Ku dhis kaymaha, lamadegaanka, kaymaha, tundra iyo...
SCARLET NEXUS waa ciyaar waxqabad door-ciyaar ah oo soo bandhigeysa ciyaar ka timaadda qof kamarad aragtida qofka saddexaad. Waxaad qaadaneysaa booska culimada waawayn ee Yuito iyo Kasane, oo mid walboo ka mid ah hibo u leh cilmu-nafsiyeedka wuxuuna leeyahay sabab uu kula dagaallamo. Si loo xalliyo dhammaan waxyaalaha qarsoon ee...
Ultima Online waa ciyaar MMORPG oo markii ugu horreysay la daabacay 1997 waxayna furtay bog cusub adduunka ciyaarta. Ultima Online, oo ka dooday markii aan ku xirnaynay internetka shabakadda garaacista, taas oo ah, khadka taleefanka, ayaa dejisay jaangooyooyinkii ka hor inta aysan jirin ciyaaro MMORPG oo saameyn ku yeeshay jiilal badan....
Goobta dagaalka 2042 waa ciyaar kufsi badan oo bartilmaameedka koowaad ah (FPS) ciyaar ay soo saartay DICE, oo ay daabacday Farshaxanka Elektarooniga ah. Dagaalkii 2042, oo ah qeybta labaad ee dagaalkii 4aad, oo la soo saaray 2013, ciyaartooydu waxay ku dhex arkeen adduunyo jahwareersan mustaqbalka dhow. Keenida miisaanka aan horay loo...
Adigoo soo dejinaya PES 2021 (eFootball PES 2021) waxaad helaysaa nooca PES 2020 ee la cusbooneysiiyay. PES 2021 PC wuxuu soo bandhigayaa xogta ciyaartoygii ugu dambeeyay iyo liisaska kooxda. Konami wuxuu sidoo kale ku sifeeyay PES 2021 inuu yahay eFootball PES 2021 Cusboonaysiinta Xilliga. Soo dejiso PES 2021 PC oo ku biir dabaaldegga...
World of Warcraft maahan ciyaar kaliya, waa adduun ka duwan ciyaartoy badan. In kasta oo aan ku sifeyn karno inay tahay ciyaar door weyn oo khadka tooska ah looga ciyaaro oo ay ciyaaraan malaayiin dad ah oo adduunka ku nool, kuwa ciyaara ciyaarta way ogyihiin inay wax badan uga jiraan. Sheekada Warcraft, oo ku bilaabatay...
Simulator -ka Dab -demiska waa mid ka mid ah cayaaraha jilitaanka dab -damiska ugu fiican ee aad ku ciyaari karto PC -ga. Simulator -ka dab -damiska, oo leh xiriir Turki ah, ayaa hadda diyaar u ah in laga soo dejiyo Steam. Haddii aad raadinayso ciyaarta jilitaanka dab -damiska oo leh sawirro tayo leh oo aad ku ciyaari karto Windows PC,...
Valorant waa Riot Games ciyaarta FPS-ka-ciyaar-bilaashka ah. Ciyaarta FPS Valorant, oo la socota taageerada luqadda Turkiga, waxay bixisaa ciyaar -ciyaar ilaa 144+ FPS, laakiin waxaa loo habeeyay inay si fudud ugu shaqeyso xitaa kumbiyuutarradii hore. Soo dejiso Valorant U dhaqaaqista ciyaarta ciyaarta, Valorant waa toogasho xeelad ku...
Rappelz waa ikhtiyaar aad u soojiidasho leh oo loogu talagalay kuwa jecel ciyaarta kuwaas oo raadinaya beddelaad cusub oo English ah oo MMORPG ah. Ciyaarta, oo aad ku dooran karto sixir iyo karti iyadoo loo eegayo qaabkaaga ciyaareed, waxay albaabka u fureysaa tacaburro ku kala duwan xeelado kala duwan. Sheekada Ciyaarta: Bilowgii waxaa...
Tusaalaha Bilayska: Saraakiisha Patrolku waa ciyaar aad ku biirto ciidanka bilayska ee magaalada khiyaaliga ah ee Mareykanka oo aad la kulanto nolol maalmeedka sarkaal bilays ah. Tusaalaha Bilayska: Saraakiisha Patrol -ka ayaa ah soo jeedinteena haddii aad jeceshahay jilitaanka booliiska, cayaaraha jilitaanka booliska. Ciyaar booliis...
Paladins waa ciyaar ay tahay inaadan seegin haddii aad rabto inaad ciyaarto ficil xoog leh FPS. Paladins, oo ah ciyaar FPS ah oo khadka tooska ah laga soo dejisan karo oo bilaash looga ciyaari karo kombiyuutaradaada, ciyaartooydu waxay tagayaan aagagga isbarbardhiga awoodahooda hiigsiga iyo ciyaartoyda kale. Paladins wuxuu asal ahaan...
Duubabka Waayeelka ee Online -ka waa RPG -ga tooska ah ee ku jira nooca MMORPG, qeybtii ugu dambeysay ee taxanaha Elder Scrolls ee caanka ah, mid ka mid ah Classics -kii RPG ee ugu dada weynaa kombiyuutarka. Sida lagu xasuusan doono, Bethesda waxay sii deysay Skyrim, ciyaartii 5 -aad ee taxanaha The Elder Scrolls, sanadkii 2011 waxayna...
FIFA 22 waa ciyaarta ugu fiican kubada cagta ee lagu ciyaari karo kombiyuutarka iyo kumbuyuutarrada. Laga bilaabo halkudhigga Awoodda Kubadda Cagta, EA Sports FIFA 22 wuxuu ciyaarta u soo dhoweynayaa nolosha dhabta ah iyadoo la horumarinayo ciyaarta aasaasiga ah iyo xilli keenaya tabo cusub qaab kasta. FIFA 22 PC waxay ku jirtaa Steam!...
Warlord Saga, oo ah ciyaar MMORPG ah oo ciyaartoy kastaa ku abuuri karo astaamo u gaar ah isaga oo ka dooranaya mid ka mid ah fasallada dagaalyahannada saddexda boqortooyo ee Shiinaha oo kala duwan, wuxuu noo soo gudbinayaa jawiga taariikhiga ah ee dagaalka isagoo leh midabyo aad u qurux badan oo aad u muuqda. Ciyaartan bilaashka ah oo...
Dota 2 waa fagaaraha dagaalka multiplayer online - mid ka mid ah xafiiltamaan ugu weyn ee kulan sida League of warkii ee MOBA ku sifayn. Dota 2 waa soosaar ay soo saartay Valve oo aad u faahfaahsan kadib guusha Dota, oo magaceeda oo buuxa uu yahay Difaaca dadkii hore. Sida loo xusuusan doono, Dota Warcraft 3, soosaar madax-bannaan oo...
Soodejiso Fortnite oo bilow ciyaarta! Fortnite asal ahaan waa ciyaar badbaado iskudhaf ah oo leh qaab dagaal Royale. Fortnite, oo u suurtagashay inuu gaaro malaayiin ciyaartoy ka dib markii uu helay qaab dagaal royale oo bilaash ah, wuxuu ku guuleystey inuu ka dhex muuqdo kulamada ugu caansan ee 2018. Ciyaarta, oo lagu soo bandhigay...
PES 2020 (eFootball PES 2020) waa mid ka mid ah cayaaraha kubbadda cagta ee ugu wanaagsan ee aad ka soo dejisan karto kuna ciyaari karto PC. PES 2020, ciyaarta kubbadda cagta ee uu sameeyay Konami isagoo qaadanaya fikradaha ciyaaryahanka khadka dhexe ee caanka ah Andrés Iniesta, wuxuu la yimaadaa horumar badan iyo hal -abuurro cusub...
Salaan dheh ficil aan xadidneyn aduunyada ay ku badantahay fowdada Cross Fire. Keenida aragti cusub MMOFPS nooca ay daabacday Z8 Games, Cross Fire waxay bixisaa astaamo ka horumarin badan kuwa la tartamaya, si aan u qaabeyn karno una xoojin karno dabeecadeena aan ku leenahay ciyaarta oo dhan jihada aan rabno. Cross Fire, oo gabi...
Beeraha Beeraha, dhismaha beerta ugu fiican iyo ciyaarta maareynta, wuxuu u soo baxaa sida Farming Simulator 22 oo leh muuqaallo cusub oo la cusbooneysiiyay, ciyaarta ciyaarta, nuxurka iyo qaababka ciyaarta. Beeraha Beeraha 22, ciyaarta beerta #1 ee ay soo saartay GIANTS Software, waxay bixisaa hawlo badan oo beeraha ah oo diiradda...
FIIRO GAAR AH: Si aad ugu ciyaarto Odayga duudduubnaa Online -ka: baakad ballaarinta Morrowind, waa inaad ku leedahay xisaabtaada Steam -ka Ciyaarta Odayga. Odayga duudduubnaa ee internetka - Morrowind waa xirmo ballaarinta loogu talagalay Waayeellada Scrolls Online, oo ah MMORPG oo ku jira Koonka Dabaqyada Waayeelka. Xirmadan...
slither.io waa ciyaar abeeso ah oo noqon karta ikhtiyaar wanaagsan oo waqtiga lagu dilo. Slither.io, oo ah ciyaar aad si buuxda oo bilaash ah uga ciyaari karto biraawsar internet-ka ah ee ugu dambeeyay, wuxuu qaataa qaaciddada ciyaarta Agar.io, oo la sii daayay waqti yar ka hor oo caan noqotay, si ka duwan . Agar.io, waxaan isku...
Pro Evolution Soccer 2013, PES 2013 marka la soo gaabiyo, wuxuu ka mid yahay ciyaaraha adag ee kubbadda cagta, mid ka mid ah cayaaraha ugu caansan ee taageerayaasha kubbadda cagta ku raaxeystaan ​​inay ciyaaraan. Taxanaha PES, oo had iyo jeer la barbar dhigo FIFA, ayaa ku hadhay harka qofka la tartamaya iyada oo ay ugu wacan tahay...
FIFA Online 4 waa nooca gaarka ah ee aad ugu ciyaari karto ciyaarta kubbada cagta ugu fiican FIFA taxane ah PC iyo mobilada si bilaash ah iyo turkiga kombiyuutarkaaga. FIFA Online 4 gabi ahaanba waa bilaash in la ciyaaro. Haddii aad rabto, waxaad ka iibsan kartaa waxyaabo kala duwan ciyaarta oo waxaad u isticmaali kartaa inaad ku abuurto...